अचम्मै दमौलीमा सर्प जस्तो मान्छे ! यो कस्तो सुन निलेपनि १० मिनेटपछि मुखैबाट सिँगै निकाल्छन्-हेस्नुहोस (भिडियो सहित) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/अचम्मै दमौलीमा सर्प जस्तो मान्छे ! यो कस्तो सुन निलेपनि १० मिनेटपछि मुखैबाट सिँगै निकाल्छन्-हेस्नुहोस (भिडियो सहित)
काठमाडौँ – संसारमा पनि अनेक थरी मान्छेहरु हुन्छन् । यस्ता यस्ता कला भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् कि हामीले बाचुन्जेल ती सबैको बारेमा थाहा पाउन पनि सक्दैनौं । नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै अनौठा प्रतिभा भएका व्यक्तिहरु छन्, जो अहिलेसम्म मिडियामा आएका छैनन् । बिश्वमा यस्ता अनौठा कलाहरु रेकर्डको रुपमा दर्जा गर्न गिनिज वल्र्ड रेकर्ड पनि छ । यस्तैमा यहि रेकर्डका लागि नेपालका एक अचम्मको व्यक्ति अघि सरेका छन् ।
दमौलीका प्रकाश गिरीको प्रतिभा तपाईले संसारमै देख्नु भएको थिएन होला । यस्तो पनि हुन्छ र भनेर एकछिन सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ । त्यस्तो कला भएका प्रकाश दमौलीबाट काठमाडौं आएर आफ्नो कला नयां नयां न्युज नेपाल मार्फत् शिशिर भण्डारीलाई देखाए र भिडियो खिचे । प्रकाशको भिडियो यतिबेला भाईरल बन्दैछ ।
वास्तवमा प्रकाशले के गर्छन् त त्यस्तो ? प्रकाश खाएर निलेका सबै चिज आफ्नो चाहना अनुसार मुखैबाट जुन सुकै समयमा निकाल्न सक्छन् । अचम्मको कुरा उनले खाएका सबै कुरा सिंगै आउंछ । यस्तो अचम्मको कला भएका प्रकाशलाई देखेर शिशिर भण्डारी पनि चकित परे । यो बिश्वमै पहिलो पटक हो, उनले भने । प्रकाशले १५० वटा खुर्सानी पालैपालो खाएर कुराकानी गरेर १० मिनेट पछि अन्तिमदेखि सुरुमा खाएको खुर्सानी सबै निकाले । भिडियो हेर्नुहोस….
नेपालमा बन्यो कोरोना विरुद्धको आयुर्वेदिक औषधि : नेपालमै क्लिनिकल परीक्षण हुँदै